समाचार डि-भोर्स पछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन नेवारको कथा ! – List Khabar
Home / समाचार / समाचार डि-भोर्स पछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन नेवारको कथा !
समाचार डि-भोर्स पछि एक्लै रमाइरहेकी गायिका मिलन नेवारको कथा !
admin January 5, 2022 समाचार Leaveacomment 127 Views
चलचित्र नोटबुकको ‘गाला रातै’ र कालीको ‘बट स्लोली स्लोली’ गीतले उनलाई स्थापित नै गरायो । गायनसँगै मिलनले केही आफ्ना गीतको भिडियोमा मोडलिङ पनि गरेकी छन् । ‘सानैदेखि मोडलिङमा पनि रहर थियो । त्यही रहर पूरा गर्न केही भिडियोमा देखिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अरुको गीतमा मोडलिङ गर्ने योजना भने छैन ।